सबै भन्दा विवादास्पद विकारहरु को एक हाइमोमिक मनोवैज्ञानिक हो। यो तथ्य भनेको एक तहले यसको उपस्थिति निर्धारण गर्न धेरै गाह्रो छ, रोगबाट धेरै पीडाहरू, उनीहरूको वातावरणले बिल्कुल स्वस्थ व्यक्तिको रूपमा बुझ्दछन्, शायद सामान्यतया केहि भन्दा अधिक ऊर्जावान। यसको अतिरिक्त, हाइपोमोनीकलल सिंड्रोमबाट पीडित व्यक्तिले उनको अवस्थालाई पीडालाई विचार गर्दैन, र त्यसैले एक विशेषज्ञसँग परामर्श गर्न चाँडै छैन। र यो समस्याको थप विकासको लागि जान्छ, त्यसैले, निराशालाई कम गर्नु हुँदैन।
हिपोमनिक मनोचिकित्सा द्विध्रुवी विकार को पछिल्लो चरण को धेरै नै समान छ, केवल सबै लक्षण केहि हद सम्म कम गंभीरता को हो। मानिसहरूले वास्तविकतासँग सम्पर्क गुमाउँदैनन् र दैनिक कर्तव्यहरूसँग राम्ररी काम गर्दैनन्, तिनीहरू भित्ता र भ्रमहरू छैनन्। बाहिरबाट, र व्यवहारमा कुनै अनियमितताको सूचना गर्न गाह्रो छ - एक व्यक्तिले सामान्य भन्दा कम मात्र अधिक ऊर्जावान र उत्साहित देखिन्छ। उनले पहिले नै उपलब्ध हुन सक्ने धेरै व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, त्यो दिन4घण्टा लाग्न सक्छ र राम्रो महसुस गर्न सक्दछ। कहिलेकाहीं व्यक्ति आफैले आफ्नो अवस्थाको असामान्यतालाई सूचित गर्दछ र त्यसलाई सामान्य बनाउन प्रयास गर्दछ, तर यो उचित परिणामको नेतृत्व गर्दैन, केवल विकारको मार्ग लामो समयसम्म। त्यसोभए, हाइपोमोनीकलल सिंड्रोमले उत्तीर्ण अवस्थालाई पार गर्दछ, जब एक व्यक्तिले आफूलाई नियन्त्रण गर्न क्षमता गुमाउँछ। उनको सोच एक दुर्घटनाग्रस्त जडानको कारण संघहरूको संग्रह हो। यसबाहेक, विचारहरू भित्री रूपमा उत्पन्न हुन्छन्, के गरिरहनुको सट्टा मूल्यांकन बिना। यस अवस्थामा, यस्तो तीव्र लक्षणहरू त्याग्न अस्पताललाई आवश्यक छ। यस चरणमा एक व्यक्तिको बोली अपरिहार्य हुन सक्छ, विषाणु बिरुवामा फारम को याद दिलाउँछ। Hypomaniacal को खतरा मनोवैज्ञानिक तथ्य यो हो कि यो अवस्था विकार को अवसादकीय अवस्था को लागि केवल संक्रमण छ, जो एक धेरै गंभीर पाठ्यक्रम को विशेषता हो। यसैले, यस अवस्थामा यो एक विशेषज्ञमा लागू गर्न आवश्यक छ।
उपचार सामान्यतया तथ्यको कारण हो कि एक व्यक्तिलाई सहयोगको आवश्यकता महसुस गर्दैन, त्यसैले उनी पाठ्यक्रम पछ्याउन इन्कार गर्न इच्छुक छन्, जो राज्यबाट सफल निकासको लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ। रोगीलाई सहयोग गर्न, एक जटिल दृष्टिकोण सामान्यतया दुर्व्यवहार र मनोचिकितिक प्रविधिको प्रयोगमा प्रयोग गरिन्छ।
मानिसहरूको सामाजिक आवश्यकता
महिलाहरु मा घबराहट र जलनशीलता
डिसोसिएटिव व्यक्तित्व विकार
वास्तविकतामा सपना कसरी बनाउने?
मनोविज्ञान मा दिलचस्प किताबहरु
वयस्कों को लागि परी कथा कथा
धर्म हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्म - तपाईंको धर्म कसरी परिभाषित गर्ने?
कार्कोफोफोबिया - कसरी क्यान्सरको डरबाट छुट्नु हुन्छ?
म विमान उड्न डर छु - म के गर्न सक्छु?
लिंग मनोविज्ञान - आधुनिक समाजमा लिङ्ग विवाद
भाप भयो कद्दिन राम्रो र खराब छ
चुम्बक कसरी बनाउने?
घर ugg जूता - सबैभन्दा सुन्दर, गर्म र आरामदायक पर्ची
Gardskagaviti को नयाँ प्रकाश
योनि ट्याब्लेट टरेजनान
स्क्याबीहरू पहिलो संकेत हुन्
हाई स्कूलका विद्यार्थीहरूको लागि स्कूल
कसरी कालीन चयन गर्ने?
Kalanchoe - गृह हेरविचार
कुकुर प्रजाति पोष्ट
Staffordshire Bull Terrier प्राप्त गर्न 22 कारणहरू
कागजको कागज कसरी बनाउने?
कसरी सुधारात्मक अंडरवियर छनौट गर्ने?
"तीन जय" को प्रतीक कसरी मदत गर्छ?
बिना मासु खाना - सबैभन्दा स्वादिष्ट दुबला वा शाकाहारी खाना हरेक स्वादको लागि!
पछाडि जिपरसँग ड्रेस गर्नुहोस्